SONATA-CANTATA: February 2016
ဒီနေ့တော့ Hato Bus နဲ့သွားကြမှာပါ...
အစီအစဉ်ထဲမှာ နေ့လည်စာ နဲ့ Tea time အချိုပွဲ အဝစား ပါ ပါတယ်။
Tochigi - Strawberry Farm
အခင်းထဲက ကိုယ်ကိုတိုင် ကြိုက်ရာရွေးဆွတ်လို့ စတော်ဘယ်ရီအဝစား...
Tokyo ပြန်ရောက်တော့ Sushi စားကြတယ်။
Tokyo Disneyland မှာ တနေကုန်...
ဂျပန်မှာ ကျယ်ပြော ပျံ့လွင်တဲ့ ကောင်းကင်ကြီးရှိတယ်
ပြန်ခဲ့ပါပြီ... စင်္ကာပူကို ညကြီးမိုးချုပ်မှ ရောက်တော့သည်။
ဂျပန်ကို လာလည်ဖို့ အကြိမ်ကြိမ်ခေါ်ခဲ့ပြီး၊ တပြုံတမကြီးနဲ့ ရောက်လာတဲ့ သူငယ်ချင်းကို လေဆိပ်ကနေ အနွေးထည်နဲ့ စီးကြိုတာက စလို့၊ အဆုံးမသတ်နိုင်တဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်းနဲ့ မိသားစုဝင်အားလုံးရဲ့ မေတ္တာကို ကျေးဇူးတင်ခြင်း များစွာဖြင့် -
အပျော်တွေရပ် လက်တွေ့ဘဝထဲ ဦးဆုံးပြန်ဝင်ရသူက သားငယ်ပါ... မနက် ၆း၃၀နာရီ Secondary ကျောင်းသစ်ကို သွားရပါတယ်။
အကိုကြီးက ဆီလိမ်းပြီး ခေါင်းဖီးပေးနေတာ...
နှစ်သစ်ဦး မျက်စိနှစ်လုံးပွင့်တာနဲ့ Shinkansen ကြီးပေါ် ပြုံးစိစိနဲ့ ရောက်နေကြပြန်ပါပြီ
တွေ့တယ်နော် Japan Rail Pass ကို အိတ်ထောင်ထဲ ထည့်ထားတာ...
သွားရင်းလာရင်း ဝေးဝေးကသာ လွမ်းနေရသည့် Fuji San
Gala Yuzawa (Snow Resort)
ရောက်ပြီ ရောက်ပြီ ဆိုတော့ ဘာကိုမှ သတိမရနိုင်တော့လောက်အောင်
Wow... Ohhh... Wharr... တသက်မှာ အရှင်လတ်လတ်ကြီး မြင်လိုက်ရတာ...
Cable Car စီးပြီး တောင်ပေါ်တက်သွားရတယ်
နှင်းတွေ တဖွဲဖွဲကျ သိပ်သတိရ...
Ski တွေ skate တွေ Blade တွေနဲ့ နာရီအတော်ကြာ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားပြီးတဲ့ အခါ (အမှန်မှာတော့ Sled ဂေါ်ပြားနဲ့ သာ ပြီးလာ ) Onsen ရေပူစမ်းမှာ စိမ်
ရှက်တတ်တဲ့ ယောက်ျားလေးတွေကတော့ အပြင်မှာဘဲ ထိုင်စောင့်နေကြပါတယ်။
ထုံးစံအတိုင်း ဒါကြီးနဲ့ ပြန်ကြပြန်တယ်
တိုကျို မြန်မာကျောင်းမှာ နှစ်သစ်ဦး ဘုရား တရား သံဃာ ရှိခိုး၊ နဝကမ္မလှူရင်း ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်၊ ဝေယျာဝစ္စ အန်တီများနှင့် စကားစမြည် ပြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Ofuna ကွမ်ရင်မယ်တော်ဆီ ဦးစွာသွားခဲ့ကြပေမယ့် နှစ်သစ်ကူးည ကျင်းပရန် ညနေမှ ဖွင့်မှာမို့ ပိတ်ထားတာနဲ့ ကြုံ ပြီး အဝေးကနေသာ ဂါရဝပြု ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြရပါတယ်။
Kamakura Daibutsu (Kōtoku-in)
(Road to Mandalay ရေးခဲ့တဲ့ Rudyard Kipling ရဲ့ Buddha at Kamakura ကဗျာအပိုင်းအစ)
တန်းစီပြီးဝယ်ရတဲ့ ရေဘဝဲကို အပြားလုပ်ပြီး အကျွတ်ကင်ထားတဲ့ Japanese Signature သရေစာကို ဘုရားတန်ဆောင်းက တန်းလျားမှာ တန်းစီထိုင်စားကြတာ ...
Flavor မျိုးစုံ ရေခဲမုန့်တွေက ရာသီအေးအေးမှာ လမ်းသွားရင်း စားကောင်းတဲ့ သရေစာ
ပင်လယ်ကမ်းခြေဆိုတော့လည်း ပင်လယ်စာက စားရပါသေးတယ်
Tokyo ပြန်ရောက်မှ စားတဲ့ New Year Eve Dinner ကတော့ အသားကင် ပါ